एकदिन शेरे भगवानको तपस्या गर्दै रैछ । अचानक भगवान प्रकट भयछन अनि भनेछन ।Ankit
एकदिन शेरे भगवानको तपस्या गर्दै रैछ । अचानक भगवान प्रकट भयछन अनि भनेछन । भगवान : त के चाहान्छस माग…? शेरे: एउटा जागिर, ठुलो गाडि र त्यसमा धेरै केटि नै केटि….! भगवान: तथास्तु…! बिचरा शेरे आज एउटा Girl’s school मा बस ड्राइभर छ!
तँ सँग के छ?